Gazety Andalusia | Recipe ao an-dakozia
Toñy Torres | | Sakafo Espaniola, Starters mangatsiaka
Ny gazpacho Andalosiana dia iray amin'izany ny lovia izay tsy ho very tsy ho eo amin'ny latabatra atsimon'i Espana mihitsyhatramin'ny fahavaratra. Izy io dia lasopy voatabia mangatsiaka, mamelombelona ary matsiro izay manampy anao hahazo hery indray. Ho fanampin'izay, ity lovia feno vitamina sy mineraly ity dia tonga lafatra hamandoana ny vatanao sy hahazaka ny hafanan'ny hafanana.
Tsotra ny fanomanana ity gazpacho ity, na izany aza zava-dehibe ny fanarahanao ireo dingana ao anaty resipeo mba ho marina ny lokony, ny tsiro ary ny firafiny. Tsy dia saro-pantarina loatra izy io, saingy iray amin'ireo fomba fahandro tokony hatao amin'ny fomba fomba. Ny gazpacho Andalosiana dia azo ampiasaina ho làlana voalohany hiaraka amin'ny trondro na hena faharoa, na ho solon'ny salady. Na dia any Andalusia aza, misy gazpacho horaisina amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Raha tsy misy resaka intsony dia midina any an-dakozia izahay Mazotoa homana!
Karazan-tsakafo: Lasopy mangatsiaka
Fotoana manontolo: 35 M
Voatabia masaka 1 kilao sy sasany
Dipoavatra maitso 1
Vinaingitra divay fotsy
Voalohany, hanasa tsara ny voatabia isika, manety ary miaro.
Avy eo, hodiantsika ny kôkômbra sy hotetehina, tsy ilaina ny hakana kely.
Manasa sy mikapa ny sakay maintso izahay.
Farany, esorinay ny tongolo lay ary tapahina roa ny halavany, hanesorana ilay voa maitso ary hisorohana ny famerenany azy avy eo.
Ankehitriny, apetratsika ao anaty fitoerany malalaka sy lava ireo akora rehetra, ho ampy ny siny lehibe.
Afangaroinay tsara amin'ny mixeur ny akora rehetra, mandra-pahazoana puree light.
Manaraka izany, mametraka saringan amin'ny vilany madio sy lalina isika ary araraka tsikelikely ilay puree.
Amin'ny alàlan'ny sotro iray, dia esorinay daholo ny ranony mandra-pahazoantsika ny hoditra sy ny voan'ny voatabia, izay hariantsika.
Raha vao voadio ny puree rehetra dia averintsika ao anaty siny indray ary asiana sira, menaka oliva vinaigitra ary vinaingitra hanandrana.
Nikapoka indray izahay ary manandrana manitsy raha ilaina.
Farany, manampy rano izahay hamenoana ny tavoara ary hapetraka ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 2 ora farafahakeliny.
Ary voila, arosoy ity mangatsiaka gazpacho ity mba hankafizanao tanteraka ny tsirony matsiro.
Zava-dehibe ny manompo mangatsiaka be ny gazpacho Andalusianina, amin'ity fomba ity no ankasitrahana indrindra ny tsirony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » Starters mangatsiaka » Gazety Andalusia
Mikraoba Chocolate Vanilla Chocolate